Iftiinka Galicia, kala badh u dhexeeya dib u cusboonaysiinta iyo dhuxusha | Cusbooneysiinta Cagaaran
Galicia hada waa ismaamulka seddexaad ee dhanka tamarta dib loo cusboonaysiin karo, iyadoo soo saareysa 17% korantada la cusboonaysiin karo ee Spain. Nasiib darrose, 31% wax soo saarkeeda waxaa lagu sameeyaa dhuxul, ku dhowaad labanlaab celcelis ahaan Isbaanish.
Maxaa ka dhigaya taas dhinaca in ay iyadu hoggaamiye u tahay tamarta la cusboonaysiin karo iyo dhinaca kalena taas uma qaadanaynin waxaa jira isbadal cimilo. Xaqiiqdii, kuma filna inaad heysato cusbooneysiin dheeri ah, waxaad u baahan tahay inaad yeelato geesinimo si aad ugu maleyso inuu jiro dhammaadka shidaalka.
Sida laga soo xigtay dowlad goboleedka, “siyaasada Xunta waa cadahay; markasta oo aan inbadan sharad ku galineyno cusbooneysiinta, taas oo ah soo celinta shidaalka iyo wax kasta oo leh asal ahaan ka soo jeeda fosil”. "Tani waa waddadii aan calaamadinay ee aan ku ballanqaadnay dagaalka adag ee ka dhanka ah isbeddelka cimilada."
Xunta kaliya ma taageerto tamarta qorraxda ama dabaysha, waxay sidoo kale ku caawinaysaa ilo kale oo dib loo cusboonaysiin karo sida biomass
1 Istaraatijiyad Kordhinta Biomass
1.1 Kuleyliyaha Biomass
2 Raajada shucaaca koronto ee Galician
Istaraatijiyad Kordhinta Biomass
Iyadoo khadka miisaaniyadda oo ah 3,3 milyan oo yuuro, Xunta de Galicia waxay dooneysaa inay dhiirrigeliso rakibidda kuleyliyaha biomass si kor loogu qaado wax soo saarka tamarta la cusbooneysiin karo loona yareeyo qiiqa gaaska lagu sii daayo ee ka badan 200 oo ka mid ah maamullada bulshada, ururada aan macaash doonka ahayn iyo shirkadaha Galician.
Waxaa la xisaabinayaa in faa iidooyinka keydka ee dhammaan kuwa ka faa'iideysta Istaraatiijiyaddan ay heli karaan 3,2 milyan oo yuuro biilka tamarta sanadlaha ah, marka laga reebo 8 milyan oo litir oo naafto ah Tani waxay gacan ka geysan doontaa yareynta 24000 tan oo ah CO2 jawiga.
Waxaan xasuusineynaa in kuleyliyeyaasha biyo-biyoodka loo adeegsado sida isha tamarta biomass iyo jiilka kuleylka ee guryaha iyo dhismayaasha. Waxay u isticmaalaan il tamar ahaan shidaalka dabiiciga ah sida jajabka xaabada, godadka saytuunka, haraaga kaymaha, qolofka lowska, iwm. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu kululeeyo biyaha guryaha iyo dhismayaasha.
Deeqahaas waxaa loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo waxtarka iyo in la yareeyo isticmaalka tamarta caadiga ah si loo yareeyo ku tiirsanaanta dhuxusha, iyada oo la dhiirrigelinayo warshadaha la xidhiidha iyo hagaajinta maaraynta iyo waxqabadka joogtada ah ee buuraha Galician.
Raajada shucaaca koronto ee Galician
Mid ka mid ah tiirarka taariikhiga ah ee taageera Galicia ee soo saarayaasha korantada waaweyn ee dalka waa dhuxusha. Waxqabadka laba kuleyl bulshada, tan Gas Natural Fenosa ee Meirama iyo tan Endesa ee As Pontes. Gaar ahaan warshaddan labaad ee korantada, taas oo ah tan leh awoodda ugu sareysa dhammaan inta hadda ka shaqeysa Spain, oo leh 1.403 megawatts (MW) oo awood leh.
Soo bixitaanka ilaha la cusbooneysiin karo dhammaadkii sagaashameeyadii ayaa hoos u dhigayay doorka labada dhirba ay ku lahaayeen jiilka isku dhafka ah, illaa laga dhigayo kaalinta labaad iyo xitaa kaalinta seddexaad marar badan, oo ka dambeeya tamarta korantada iyo tamarta dabaysha. Laakiin jimicsi aan caadi ahayn oo saadaasha hawada ah sidii ka dhacday 2015 Galicia oo sanado badan lagu kordhin tas-hiilaad cusub oo dib loo cusboonaysiin karo, waax curyaamisay dib-u-habeynta tamarta, dheelitirka ayaa mar kale la jarjaray dhuxul-dhagaxuna wuxuu dib u helay carshigii wax soo saarka korantada ee ismaamulka, kaas oo ku daray wadarta saacadaha 29.625 gigawatt (GWh), 5,3% ka yar sanadkii hore.
Wax soosaarka kuleylka ayaa gaaray 11.066 GWh ka dib koror ku dhowaad 16%. Intaa waxaa dheer, mid ka mid ah xogta ugu weyn ee isticmaalka dhuxusha ee Galicia laga bilaabo sanadihii la soo dhaafay -Labadii sanadihii 2014 iyo 2013 waxay kudhowaad 9.500 oo isugujiraan 37% dhalinta korantada aduunka ee Galicia.
Waxqabadka warshadda 'Pontes' ayaa kordhay, gaar ahaan, 9,1%, oo leh 7.929 GWh, qaar ilaa 1.500 ka badan dhammaan barkadaha bulshada dhexdeeda; iyo 36,5%, illaa 3.137 GWh, tii Meirama. Kulaylku wuxuu soo maray kor u kac muhiim ah dhammaan Gobolka. 24%, qiyaastii 51.000 GWh. Taas oo iyaduna keenta koror aad u badan oo gaasaska wasakhaysan ah. Qiiqa kaarboon dioxide ee qiiqa ka soo baxa dhalinta korantada ee Isbaanishka ayaa kordhay 2015, inta badan waxaa sabab u ah baahida loo qabo in laga hortago hoose wax soo saarka Haydarooliga iyo tamarta dabaysha oo leh jiil badan oo dhuxul ah iyo wareeg isku dhafan - ayaa xaqiijinaya REE-. Sidaa darteed, heerka qiiqa kaarboonka dioxide ee ka imanaya waaxda korantada ee Isbaanishka wuxuu istaagay 2015 milyan tan tan 77,4, qiime 15,1% ka sarreeya qiiqa hawada 2014 in.
Maxayse tahay sababta hoos u dhacan ku yimid howlgalka dhirta koronto-dhalinta iyo marawaxadaha dabaysha? Maxaa yeelay waxay ahayd sanad kulul oo qalalan. Sidoo kale Galicia, halkaas oo roob urursan uu ka hooseeyay 75% diiwaanka caadiga ah, sida isu dheellitirka Hay'adda Saadaasha Hawada ee Gobolka (AEMET) ay tilmaamayso.
Taasi waa sababta burburka weyn ee wax soo saar ee bulshada uu uga yimid, gaar ahaan, hydraulics. Korontada kaydadka ayaa ku hartay 6.457 GWh, taas oo ka dhigan a 36,4% hoos u dhac marka la barbar dhigo 2014, markii ay ahayd isha ugu horreysa ee tamarta laga helo Galicia. Jagadaada guud ahaan jiilka waxay hoos ugu dhacday 21,8%.
Maqnaanshaha beeraha dabaysha oo badan, awoodda dabaysha waxay lahayd dabeecad aad u deggan. 8.444 GWh waxay ka tagtay marawaxadaha dabaysha, 22% korantada bulshada sanadkii la soo dhaafay, ka dib markay la kulmeen a koror aad u yar oo ah 1,5%. Waxyaabaha sidoo kale saameyn ku yeeshay hoos u dhaca miisaanka cusbooneysiinta ee dambiisha korantada Galician. Laga soo bilaabo 61% oo gaadhay 2014 ilaa 50% 2015.
In kastoo taasi isbadali karto mustaqbalka dhow. Xaraashkii ugu dambeeyay ee tamarta ee bishii May ee la soo dhaafay, kan labaad ee ugu sareeya ayaa ahaa Gaaska Dabiiciga ah Fenosa, oo leh 667 MW. Qeyb wanaagsan ayaa imaan karta Galicia, halkaas oo ay ku leedahay darsinno rakibid ah oo la sameeyo, saddex boqol oo megawatt. Kuwaas, 198 MW oo ka yimid qandaraaska tamarta dabaysha, aqlabiyadda ayaa sugaysa oggolaanshaha Xunta.
Rajada kale ee weyn ee hawada cusub ee waaxda ku jirta Galicia waa Norvento, abaalmarinta shanaad oo leh 128 MW. Waxay leedahay 330 mashruuc oo dabayl ah, 303 ka mid ah waxay ka yimaadeen qandaraaska Galician, oo leh 7 leh iftiin cagaaran oo lagu daro 144 MW.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Iftiinka Galicia, kala badh u dhexeeya dib u cusboonaysiinta iyo dhuxusha